YANDEX STORE က ANDROID အတွက် DOWNLOAD - အန်းဒရွိုက် - 2019
Android အတွက် Yandeks.Store
အဆိုပါစံ Windows ကိုအသံအတိုးအကျယ်ကိုထိန်းချုပ်သငျသညျအသံ level ကိုထိန်းညှိဖို့လိုအပ်အရာအားလုံးရှိပါတယ်။ သို့သော်ဤရှိနေသော်လည်းလူများစွာကပိုအဆင့်မြင့်အရာတစ်ခုခုနှင့်အတူအစားထိုးဖို့ဘယ်လိုစဉ်းစားနေကြသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, program ကို Volume2 ကူညီပေးပါမည်။
ယင်း၏အများအပြား features တွေများထဲတွင်အောက်ပါနေသောခေါင်းစဉ်:
standard feature တွေအသံအတိုးအကျယ်ကိုထိန်းချုပ်
Volume2 အမည်ရ, သူ့ဟာသူအတွက် standard volume ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထားအတူတူအင်္ဂါရပ်ရှိပါတယ်:
တကယ်တော့အသံ level ကို setting ။ သို့သျောလညျးဆိတျကှဒီကနေ, program ကိုလက်ဝဲနှင့်လက်ယာနှစ်ဖက်အကြားချိန်ခွင်လျှာကိုထိန်းညှိဖို့စွမ်းရည်ပေးပါသည်။
အဆိုပါရောနှောအသံအတိုးအကျယ်မှ Access ကို။
အသံက devices တွေကိုချိန်ညှိခြင်း။
Volume2 သင်ရွေးချယ်ထားသည့်တည်နေရာအတွက် mouse ကိုဘီးကိုအသုံးပြုပြီး volume level ကိုထိန်းချုပ်ခွင့်ပြုထားသည်။
ဒီ feature အသံလက်ရှိကစားနေသည်ကိုဘယ်လိုအသံကျယ်ပြလတံ့သောသေးငယ်တဲ့ညွှန်ပြချက်ဖော်ပြရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
အဆိုပါအစီအစဉ်တွင်သင်သည်အမျိုးမျိုးသောအသံ parameters တွေကိုဒါမှမဟုတ်ပရိုဂရမ်ကထိန်းချုပ်ထားလိမ့်မည်သည့်နဲ့ကီးဘုတ် shortcut ကို assign လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
သင့်ရဲ့ PC ကို၏သတိပေးချက်များနှင့်အချိန်ဇယားဆွဲ Create
Volume2 ၌မည်သည့်အချိန်တွင်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုစီစဉ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျကိုလညျးလုပ်ဆောင်ချက်၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်အခွအေနမြေားကိုထိန်းညှိပေးနိုင်သည်။
အဆိုပါ standard volume ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းထက်အဆင့်မြင့်သောအသံ setting များကို;
ရိုးရှင်းပြီးအလိုလိုသိ interface ကို;
ယေဘုယျအားဖြင့်, အတှဲ2program ကို သာ. ကြီးမြတ်အဆင်ပြေစေရန်နှင့်အပိုဆောင်းလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအမျိုးမျိုး၏ရရှိမှုကိုကျေးဇူးတင်စံ Windows ကိုအသံအတိုးအကျယ်ကိုထိန်းချုပ်ဘို့ပြီးပြည့်စုံအစားထိုးဖြစ်ပါတယ်။
အခမဲ့ Volume2 Download
အသံချိန်ညှိဖို့အစီအစဉ်ကို အသံ Booster အသံချဲ့ထွင် SRS အသံ Sandbox
Volume2 အစီအစဉ်ကိုအသံ parameters များကိုအဆင့်မြင့်ထိန်းချုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်အတူစံ Windows ကိုအသံအတိုးအကျယ် controller ကိုများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အစားထိုးဖြစ်ပါတယ်။
ရေးသားသူ: Alexandre Irza
Size ကို: 8 MB အထိ
ဗီဒီယို Watch: Alex Muhangi Comedy Store March 2019 - Crazy University (စက်တင်ဘာလ 2019).
သင့်ရဲ့ PC ကိုမှအန်းဒရွိုက်မှအဆက်အသွယ်လွှဲပြောင်း
အဘယ်အရာကိုသင်က Google Chrome ဘရောက်ဇာကို run မရကြပါလျှင်လုပ်ဖို့
အန်းဒရွိုက်-စမတ်ဖုန်းနဲ့ iPhone ပေါ်မှာလူမှုကွန်ယက်ကိုအတန်းဖော်မှဗီဒီယိုကို download လုပ်လုပ်နည်း
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Card များကိုမာစတာ 10,0
Rostelecom ကုမ္ပဏီ router များ၏ကိုယ်ပိုင် branded မော်ဒယ်နံပါတ်ရှိပါတယ်။ ချိတ်ဆက်ပြီးတာနဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုသူဒီ router ကိုအပေါ် port forwarding ကိုလိုအပ်နိုင်ပါသည်။ task ကိုလွတ်လပ်စွာစာသားအနည်းငယ်ခြေလှမ်းများဖျော်ဖြေနေသည်ကအချိန်အများကြီးယူမထားဘူး။ ဒီဖြစ်စဉ်၏ခြေလှမ်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအားဖြင့်ခြေလှမ်းမှပေါ်ရွှေ့ကြစို့။ ဆက်ဖတ်ရန်
Adobe Acrobat Pro ကိုတစ်စာမျက်နှာကိုဖျက်ဖို့ကိုဘယ်လို
https://termotools.com my.termotools.com © အန်းဒရွိုက် 2019